Te Hazoto Hianatra ny Soratra Masina ve Ianao?
HAMAKY AMIN'NY TENY Abua Abui Acholi Afrikaans Aja Albaney Alemà Alur Amharique Anglisy Arabo Armenianina Asamey Ateso Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bambara Baoulé Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bengali Biak Bichlamar Bicol Boligara Boulou Cakchiquel Andrefana Catalan Cebuano Changana (Mozambika) Chavacano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cinamwanga Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Dayak Ngaju Digor Douala Drehu Efik Esan Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Féroïen Ga Galicienne Galoà Garifuna Gokana Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibinda Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Jula Kabiyè Kabuverdianu Kachin Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kissi Kongo Konkani (Romanina) Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Guinée-Bissau Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kurde Kurmanji Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Kyangonde Laosianina Lenje Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mende Mingrelian Mixe Mixtèque (Guerrero) Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Niue Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Odia Okpé Oromo Ossète Otetela Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quiché Romanianina Rosianina Runyankore Rutoro Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Rômania (Serbia) Samoanina Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tandroy Tankarana Tarahumara Afovoany Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Brezilianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Édo Éwé
Tianao ve ny tsy hivadika hoatran’i Daniela rehefa iharam-pitsapana? Nazoto nianatra ny Tenin’Andriamanitra izy, anisan’izany ireo faminaniana saro-takarina. (Da 9:2) Afaka ny tsy hivadika koa ianao, raha mazoto mianatra Baiboly. Nahoana? Satria vao mainka ianao hino hoe hotanterahin’i Jehovah izay nampanantenainy. (Js 23:14) Hanjary ho tia azy kokoa ianao, ka te hanao ny tsara. (Sl 97:10) Ahoana anefa no hatao? Ireto misy soso-kevitra:
Inona no ianarana? Tsara, ohatra, ny mizatra manomana fivoriana. Handray soa kokoa amin’ny famakiana Baiboly isan-kerinandro ianao raha mikaroka an’izay hevitra tsy azonao. Misy koa tia mianatra bebe kokoa momba an’ireo faminaniana ao amin’ny Baiboly, ny vokatry ny fanahy, ny dia misionera nataon’i Paoly, na ny zavaboarin’i Jehovah. Raha misy fanontaniana ara-baiboly tonga ao an-tsainao mandritra ny andro, dia soraty ilay izy. Karohy ny valiny rehefa mianatra amin’ny manaraka ianao.
Aiza no ahitana fanazavana? Jereo ilay video hoe Fitaovana Fikarohana Harena Ara-panahy. Misy soso-kevitra vitsivitsy ao. Andramo karohina, ohatra, hoe iza avy ireo firenena matanjaka mifanitsy amin’ireo bibidia resahin’ny Daniela toko faha-⁠7.
Ary ahoana ny fotoana? Tena ilaina ny mianatra tsy tapaka raha te hifandray tsara amin’i Jehovah foana. Azo atao fohifohy aloha ilay fianarana, dia avy eo ampitomboina tsikelikely. Hoatran’ny mikaroka harena miafina ianao rehefa mianatra Baiboly. Vao mainka ianao te hikaroka, arakaraka ny ahitanao zava-tsarobidy! (Oh 2:3-6) Hazoto kokoa hianatra ny Tenin’Andriamanitra ianao, ary ho zatra mianatra azy io.—1Pe 2:2.
Jereo ny Mifohaza! Febroary 2012, p. 18-20 fa misy soso-kevitra hanampy anao ho tia mianatra Baiboly ao.
MIFANITSY AMIN’IZA IREO BIBIDIA RESAHIN’NY DANIELA TOKO 7?
Ahoana no nahatanterahan’ny Daniela 7:8, 24?
HIANARAKO AMIN’NY MANARAKA:
Mifanitsy amin’iza ireo bibidia resahin’ny Apokalypsy toko 13?